Waa maxay aragtiada Mareykanka ee ka bixitaanka Al Shabab magaalada Kismaayo
“Al Shabab si buuxda wali loogama guuleysan, waxaanu rajeyneynaa in dagaalka uu sii socon doono iyagoo Al Shabab ay soo qaadi doonaan weeraro ka dhan ah AMISOM iyo Dowlada Soomaaliya, laakin si kastaba wuu saameeyey howlgalka hada socda,” ayuu yiri Carson oo wareysi siiyey VOA.
“Dhamaan horumaradaan uma taagna oo kaliyah guul milatari ee waxaa ay qeyb ka tahay oo ku jira horumaro laga sameeyey xaga siyaasada iyo xasiloonidi uu dalkaan u baahnaa oo soo laabaneyso,” ayuu .
Ciidamada Kenya iyo kuwa Dowlada Soomaaliya ayaa qabsaday xaafadaha dhinaca Dakada Kismaayo, hase ahaatee wali maysan u galin gudaha xilli Al Shabab ay faarujiyeen guud ahaan magaalada.
Hassan says:	September 30, 2012 at 1:00 pm	Gudaha umagalin cidamada huwaanta ah maxa lagawada? wataa ay dhax fadiyaan airportka, dakada iyo kontrolka lagasoogaala magaalada. maxa kala oo diman oo lagala? Mise maxaad kawadaan goobaha shacab yalagalin sida mooriyaanta Xamar oo kale?